Somalia: Madfac 6 Qof Oo Hal Qoys Ah Ku Dilay Marka - Wargane News
Home Somali News Somalia: Madfac 6 Qof Oo Hal Qoys Ah Ku Dilay Marka
lix qof oo isku qoys ah ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen ka dib markii xalay uu madfac ku dhacay guri ay daganaayeen, oo ku yaalla tuulo la yidhaahdo Faranga oo u dhaxysa deegaanada Buufow iyo Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaaliya. 2 qof ayaa la sheegay inay sidoo kale ku dhaawacmeen madfacaasi.
lixda qof ee dhintay ayaa afar kamid ah waxa ay yihiin carruur, sida uu BBC-da u sheegay gudoomiyaha degmada Marka, Xasan Cumar. Guddoomiyuhu waxa uu sidoo kale sheegay in uu tuhunsan yahay in madfacaasi ay soo tuureen AMISOM oo saldhig ku leh halkaasi. “Sax ma aha in AMISOM mar kasta oo la soo weerarro ama qarax lala eegto ay ka aargoostaan dadka rayidka ah. Marar badan ayaan arrintan kala hadalnay”, ayuu yidhi Guddoomiyaha degmada Marka, Xasan Cumar.
AMISOM wali kama aanay hadlin in madfacasi ay iyaga tureen iyo in kale.